Alaska Airlines launching new flights and adding more routes | Airline News
Bogga ugu weyn » Wararka Diyaaradaha » Alaska Airlines waxay bilaabeysaa duulimaadyo cusub waxayna ku dartay jidad badan
Alaska Airlines waxay bilaabeysaa duulimaadyo cusub waxayna ku dartay jidad badan
Iyada oo dad badan ay mar kale duulayaan, Alaska Airlines waxay weli ku sii jirtaa Daryeelka Heerka-xiga ee martideeda iyo shaqaalaheeda iyadoo la hirgelinayo in ka badan 100 dariiqo oo lagu ilaaliyo heerka ugu sarreeya ee badbaadada,
Alaska Airlines waxay ku sii kordheysaa Boise halkaas oo ay muddo dheer ahayd shirkadda ugu weyn.
Marka laga yimaado caasimadda Idaho, Alaska Airlines ayaa hadda u duuleysa Chicago iyo Austin.
Shirkadda Alaska Airlines waxay adeeg cusub u bilawday Pullman-Moscow iyo Phoenix.
Boise wuu kobcayaa! Iyo Alaska Airlines waxay ku sii kordheysaa magaalada firfircoon ee aan muddo dheer ahaan jirnay shirkadda ugu weyn. Waxaan u duulineynaa martideena Dooxada Qasnadaha ee Idaho meelaha ay xiisaynayaan inay booqdaan. Laga bilaabo maanta, waxaan bilaabeynaa adeeg maalinle ah oo aan kala joogsi lahayn oo u dhexeeya Boise iyo Chicago O'Hare, iyo Boise iyo Austin. Sidoo kale maanta, waxaan ku dhawaaqeynaa duulimaad cusub oo aan kala joogsi lahayn oo u kala gooshaya Boise iyo Pullman-Moscow Airport Airport ee Washington, iyo Boise iyo Phoenix.
"Martidayadu waxay na tusayaan sida ay ugu faraxsan yihiin adeegeena cusub ee Chicago iyo Austin oo ka socda Boise oo leh duubitaanno adag xilliyada xagaaga oo dhan," ayuu yiri Brett Catlin, oo ah madaxweyne ku xigeenka shabakadda iyo xulafada Alaska Airlines. Wadadeena cusub ee sanadka oo dhan isku xireysa Boise iyo Pullman-Moscow waxay xiriir muhiim ah siin doontaa labada jaamacadood ee waaweyn ee aagaas, iyo joogsiga xilliyeed ee Phoenix waa wado kale oo cabsi leh oo si dhaqso leh loogu baxsado qorrax iyo diirimaadka lamadegaanka.
Maaddaama heerarka tallaalku ay kordhayaan, sidaas oo kale ayaa doonitaanku u socdaalayaa mar kale. Qoysaska iyo asxaabtu waxay rabaan inay is arkaan fool-ka-waji oo ay wadaagaan isku duubni - ma ahan wicitaan fiidiyo kale. Waxaan kusoo kordhineynaa jidad cusub iyo duulimaadyo badan si aan uga dhigno isku xirnaantaas mid fudud. Jiilaalkan, waxaan haysan doonnaa ilaa 30 maalinle oo aan joogsi lahayn oo ka tagaya Boise illaa 14 meelood oo loo socdo Alaska iyo walaasheen dayuuradda Horizon Air. Waxaan horey u helnay safarro aan joogsi lahayn iyo safarro maalinle ah oo ka baxa Boise marka loo eego duulimaadyada kale. Balanqaadkeena Boise Airport iyo martidayadu kaliya way sii xoogeysanayaan.
Taariikhda Magaalada Lammaanaha Ka bixitaan Imaansho Frequency Dayuurad
Aug. 17 - Boise –Pullman-Moscow 11: 10 am 11: 15 am 5x / Toddobaadle Q400
Aug. 17 - Pullman-Moscow -
Boise 11: 55 am 1: 34 wakhti dambe 5x / Toddobaadle Q400
Nov. 19 April 18 Boise - Phoenix 10: 30 am 12: 30 wakhti dambe Daily E175
Nov. 19 April 18 Phoenix - Boise 1: 10 wakhti dambe 4: 15 wakhti dambe Daily E175
"Boise Airport way ku mahadsan tahay in Alaska Airlines ay sii wado inay hagaajiso isku xirnaanta dadka degan Treasure Valley," ayay tiri Agaasimaha Boise Airport Rebecca Hupp. “Juqraafi ahaan baaxadda leh ee Idaho, duulimaadyada gobollada ayaa xiriir muhiim ah ka ah nidaamkayaga gaadiidka. Waxaan ku kalsoonahay adeegga aan joogsiga lahayn ee Pullman-Moscow inuu la jaan qaadayo baahida bulshadayada, waana ku faraxsanahay in Alaska ay markale isku xireyso laba gobol oo muhiim ah gobolka. ”